हावाबाट को’रोना फैलिरहेको छ, सा’वधानी अपनाउनुहोस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय – Hamro24News
हावाबाट को’रोना फैलिरहेको छ, सा’वधानी अपनाउनुहोस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
July 7, 2021 adminLeaveaComment on हावाबाट को’रोना फैलिरहेको छ, सा’वधानी अपनाउनुहोस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले को’रोना भाइरस हावामा फैलिरहेको सा’वधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले भाइरस, मानिस र वातावरणको त्रि’कोण संक्रमण हुन मुख्य भूमिका खेल्ने बताए।
‘हावामा को’रोना फैलिरहेको भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। हामी बस्ने कोठमा, झ्याल हावा खेल्ने हुनुपर्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘ हाम्रो व्यवहारबाट संक्रमण सर्ने हुन्छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गर्न नछोडौं।’ रो’गसँग ल’ड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिमा धेरै संक्रमण हुनसक्छ।
खाजाखाँदै गरेका इन्जिनियर सहित ३ जना बाढी आएको थाहापाएपछि गाडी चढेर भा ग्न खोज्दा बगायो पसलको समेत नामोनिसान छैन